Lithuania iyo Kazakhstan si ay u bilaabaan adeegga hawada rakaabka tooska ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Lithuania iyo Kazakhstan si ay u bilaabaan adeegga hawada rakaabka tooska ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Kazakhstan • Lithuania Breaking News • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Lithuania iyo Kazakhstan si ay u bilaabaan adeegga hawada rakaabka tooska ah.
Go'aanka kama dambaysta ah ee duulimaadyada caadiga ah ayaa la gaari doonaa kadib markii labada mas'uulba la siiyo ogeysiiska oggolaanshaha duulimaadka guddiyada gaarka ah ee kormeera xaaladda COVID-19 ee labada dal.
Duulimaadyada rakaabka ee Nur-Sultan ee Vilnius iyo Almaty ilaa Vilnius ayaa la bilaabi doonaa horaanta 2022-ka.
Shirkadda Wizz Air ee Hungary ayaa si toos ah u qorshayn doonta duulimaadyada u dhexeeya Kazakhstan iyo Lithuania.
Saraakiisha duulimaadyada ee Kazakhstan iyo Lithuania ayaa saxiixay Borotokoolka Ujeedka si ay u sameeyaan duulimaadyo joogto ah.
Sida laga soo xigtay adeegga saxaafadda ee Wasaaradda Warshadaha iyo Horumarinta Kaabayaasha ee Jamhuuriyadda Kazakhstan, duulimaadyo toos ah oo rakaab ah ayaa la bilaabi doonaa inta u dhexeysa Kazakhstan iyo Lithuania dhawr bilood gudahood.
Nuur-Sultan-Vilnius iyo Almaty-Vilnius oo la qorsheeyay duulimaadyo ganacsi ayaa la filayaa inay bilowdaan horaanta 2022-ka.
Guddiga Duulista Hawada ee Kazakhstan iyo wakiillada Duulista Hawada ee Lithuania ayaa maanta wadahadallo ku yeeshay caasimadda Kazakhstan, Nur-Sultan, iyagoo ka wada hadlay sidii loo bilaabi lahaa laba duulimaad oo joogto ah.
Waxaa la isku raacay in Hungary Wizz Air ayaa ka shaqayn doona duulimaadyadaas.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Warshadaha iyo Horumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha adeegga saxaafadda, duullimaadyadu waxay si ku -meel -gaar ah u bilaabi doonaan rubuca hore ee 2022.
Iyada oo qayb ka ah wadahadalada, saraakiisha duulimaadyada ee Lithuania iyo Kazakh ayaa ka wada hadlay arrimaha iskaashiga dhinaca gaadiidka cirka waxayna is dhaafsadeen Protocol -ka Ujeedada la saxiixay si loo sameeyo duulimaadyada caadiga ah.